दुलहाले बेहुलीकै घरमा विवाहित महिलालाई गरे कर णी, बहिनीले नै किन मिलाइदिइन् त्यस्तो ब्यवस्था? – Hamro24News
July 22, 2021 adminLeaveaComment on दुलहाले बेहुलीकै घरमा विवाहित महिलालाई गरे कर णी, बहिनीले नै किन मिलाइदिइन् त्यस्तो ब्यवस्था?
एजेन्सी । समाजमा अनौठो र विश्वास गर्नै नसकिने घटना हुन्छन् । भारतको मध्य प्रदेशको इंदौरमा यस्तै घटना भएको छ । एक विवाहित महिला आफ्नो मामा ससुराको छोरोको बिहेमा आएकी थिइन्। जहाँ दुलहाले नै उनलाई कर णी गरे । यो सबै ब्यवस्था ति वेहुलाको बहिनीले मिलाइदिएकी थिइन् ।
प्रहरीले बेहुला र बेहुलाको बहिनीलाई पक्राउ गरेको छ । जुलाई ८ मा यो घटना भएको हो । विवाहमा सहभागी भएर आफ्नो घर गएकी विवाहिता महिला बिरामी परेपछि उनले घटना बारे आफ्ना श्रीमानलाई बताएकी थिइन् । त्यसपछि श्रीमानले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
दुलहाले विवाहित महिलालाई तीन पटक कर णी गरे
प्रहरीलाई वयान दिँदै महिलाले भनिेकी छन् की उनलाई घटना पछि मा र्ने ध म्की पनि दिएका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । दाजु वहिनीलाई अनुसन्धान गरेर जे ल पठाइएको छ । महिलाले अनिलले आफुलाई यस्तो गरेको र उनी मामा ससुराको छोरा भएको बताएकी छन् । महिलाले तीन पटक घटना भएको बताएकी छन् । विवाहवाट घर फर्किए पछि उनी विरामी भइन् । त्यसपछि उनले श्रीमानलाई घटनाबारे बताइन् ।
उनले बयानमा भनेकी छन् की विवाहमा सहभागी हुन उनी गएकी थिइन् । आफुलाई वेहुलाको वहिनीले बोलाएर एउटा कोठामा लिएर गइन् । जहाँ बेहुला एक्लै बसेका थिए । बहिनीले बेहुला एक्लै बसेको कोठामा उनलाई पठाएर बाहिरवाट ढोका लगाइदिइन् । वेहुला न सा मा थिए । खाली कोठामा बेहुलाले उसलाई अन्याय गरियो। दोस्रो पटक पनि बेहुलाकी बहिनीले उनलाई नजिकैको घरमा लगिन् जहाँ उनै वेहुला पहिले नै देखि नै बसेका थिए । त्यहाँ पनि उनलाई अन्याय गरियो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
खतरनाक मानिएको कालो ढुंसीका बिरामी नेपालमा पनि बढ्दै, कति जना छन् संक्रमित?